pfingo vs skype vs vbuzzer? — MYSTERY ZILLION
pfingo vs skype vs vbuzzer?
January 2011 edited April 2011 in Tech News
pfingo vs skype vs vbuzzer ..internet ဆိုင်တော်တော် များများ မှာ ခုတလော တွေ့နေရတယ် ကိုယ်တိုင် အကောင့်၀ယ်ချင်ရင် ဘယ်တစ်ခု က ပိုကောင်းလည်း ဆိုတာ သိတဲ့လူများ ဆွေးနွေးပေးကြပါ ...ဖြစ်နိုင်ရင် စျေးနှူန်းကော အချိန်ကောပါ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပေးထားရင်ပိုကောင်းပါတယ် ..
အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းရင်တော့ ဘယ်ဟာမှ ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး...
အကောင်းဆုံး ကို ညွှန်းပါဆိုရင်တော့ ဆသရက တယ်လီဖုန်း ပါခင်ဗျာ
seinkalar wrote: »
Pfingo ရော Skype ရော တစ်ခြားသော App တော်တော်များများကောင်းပါတယ်... အဓိက ကောင်းဖို့လိုနေတာက Connection ပါ....
Customer Complain တက်တာများလို့ ညီ စိတ်အချဉ်ပေါက်နေတယ ်ထင်တယ် . .
Freetalky ကတော့ ဂျာနယ်မှာရေးထားတာ ကောင်းတယ်ပြောကြတယ်...
အင်တာနက်ဂျာနယ်တို့ weekly elevens ဂျာနယ်တို့ ပြောပြချက်အရပေါ့..
Dial up နဲ့တောင်သုံးလို့ရတယ်ပြောပါတယ်...
ခု ဒီရက်ပိုင်း ADSL လိုင်းတွေလဲ dial up သာသာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားတယ်
skype နဲ့Pfingo ဆိုရင် skype ကပိုကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်စမ်းပီးပါပီ...pfingo လိုင်းမတက်တဲ့အချိန် မှာတောင် skype ကလိုင်းဖုန်းနဲ ့ပြောသလို ကြည်ကြည်လင်လင်ပြောနိုင်ပါတယ်။freetalk is no good same like pfingo. ...vbuzzer မသုံးဘူးပါ။
pfingo>>>not easy open acount ,they open from singapore...........skype>>> can easy open acount in myanmar
pfingo>>>need more internet speed.........skype>>> can use in slow connection
pfingo>>>software only can windo pc easy................skype>>>can install easy Pc n mobile phone
pfingo>>>can buy top up card 15ssd=10000/ks.............skype>>>unlimited world plan only 13000/ks for 1month(singapore,thai,usa,japan line ph,ex...)
pfingo>>>3month,6month,1year plan for free 1country(exp;singapore).............skype>>>malaysia,brunai,korea...400min only 10000/ks
ဟုတ်ပါတယ် skype က 5kpbs လောက်ရှိရင် ကြည်ကြည်လင်လင် ပျောလို.ရပါတယ်
နောက် pfingo ကအကောင့် လုက်ရတာအဆင်မပြေ ဘူးဗျ။
နောက် skype က pfingo ထက် ပိုစျေးပေါတယ်။
android devices တွေမှာလဲ သွင်းလို့လွယ်တယ်။
Voicemail - Skype ask you to pay or you buy SkypeIN, Vbuzzer offers it to every account for free. I test it and the voicemail comes to my email in MP3 format.
Pricing - Vbuzzer beats Skype in pricing, they give away the software for free the same as Skype do, but they offer much cheaper LD rates, one cent per minute to 20 destinations. Also their calling plans are amazingly low - $7.99/mon unlimited US. Don't know how long it can last though.